Ilifa Lezizukulwana Ezisixhenxe | Ibali Lobomi
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISilozi ISpanish Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Isoko Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAymara IsiBhulu IsiBulgarian IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiChitonga IsiChitumbuka IsiCibemba IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEfik IsiEwe IsiFinnish IsiFrentshi IsiGa IsiGeorgia IsiGrike IsiGuarani IsiHausa IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKikamba IsiKikaonde IsiKikongo IsiKikuyu IsiKimbundu IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKiribati IsiKirundi IsiKongo IsiKorea IsiLingala IsiLithuania IsiLuganda IsiLuo IsiLuvale IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMaya IsiMyanmar IsiNahuatl (saseCentral) IsiNgabere IsiNgesi IsiNorway IsiNyaneka IsiNzema IsiOssetia IsiOtetela IsiPapiamento (saseAruba) IsiPapiamento (saseCuraçao) IsiPhuthukezi IsiPolish IsiQuechua (saseBolivia) IsiRashiya IsiRomania IsiSango IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSranantongo IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwahili (saseCongo) IsiSwedish IsiTagalog IsiTahiti IsiTatar IsiThai IsiTigrinya IsiTiv IsiTok Pisin IsiTotonac IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTshiluba IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTuvaluan IsiTwi IsiTzotzil IsiUmbundu IsiVietnam IsiXhosa IsiYoruba IsiZulu isi-Igbo isiZapotec (saseIsthmus)
Ilifa Lezizukulwana Ezisixhenxe
Kubalisa uKevin Williams
Abantu bathi ndingutat’ ehleli. Isithomo, amehlo, nendlela endinoburharha ngayo. Kodwa ikho nenye into endiyifumene kutata, ilifa elixatyiswe zizizukulwana ezisixhenxe zakuthi. Makhe ndinibalisele.
Mna notata sifunda ngelifa lentsapho yethu
Ukhokho wam uThomas (1) * Williams wazalwa nge-20 kaJanuwari 1815 eHorncastle eseNgilani. Umama wakhe wasweleka emva kweminyaka emibini ezelwe, baza bakhuliswa ngutata wabo uJohn Williams. Ukhokho uJohn wafundisa utamkhulu uThomas ukuba ngumchweli, kodwa waphetha ekhetha umsebenzi owahlukileyo kulowo.
Ngelo xesha kwakuqalisa ukuxhaphaka kweenkonzo eNgilani. Umfundisi uJohn Wesley wayesandul’ ukuqhekeka kwiCawa yaseNgilani, waza waqala iWisile, iqela elalikhuthaza ukufundwa kweBhayibhile nobuvangeli. Iimfundiso zikaWesley zasasazeka okomlilo wedobo, ibe intsapho yakwaWilliams yazithanda gqitha. UTamkhulu uThomas waba ngumshumayeli waseWisile, waza ngokukhawuleza emva koko wavolontiya ukuya kufundisa abantu iBhayibhile kuMzantsi Pasifiki. NgoJulayi ka-1840 yena nenkosikazi yakhe uMakhulu uMary (2) bazibona sele behlala eLakeba, isiQithi * esinentaba-mlilo eFiji, ndawo leyo eyayihlala amazim, abantu abatya inyama yomntu.
Babunzima ngeyona ndlela ubomi ukufika kukaTamkhulu Thomas noMakhulu uMary eFiji. Babesebenza kwiimeko ekunzima ukuzinyamezela nakubushushu obungathethekiyo. Babebona nezinto ezimanyumnyezi—iimfazwe zobuhlanga, ukukrwitshwa kwabahlolokazi, ukubulawa kweentsana, nokutyiwa kwabantu, ibe abantu basekuhlaleni babengayifuni nokuyibona iBhayibhile. UMakhulu uMary nonyana wakhe olizibulo uJohn bagulela ingcwaba. Ngo-1843 uTamkhulu uThomas wabhala: “Ndandiziva ndikrukrutheka ngaphakathi. . . . Ndandingazi nokuba mandithini.” Kodwa banyamezela, besomelezwa lukholo ababenalo kuYehova uThixo.
Kwangelo xesha, esebenzisa ubuchule bakhe bokuchwela, uTamkhulu uThomas wakha ipomakazi lendlu lokuqala eFiji. Le ndlu yayenziwe ngendlela yokuba kungene impepho ngaphantsi komgangatho, nto leyo eyatsala umdla wamaFiji. Kanye ngaphambi kokuba uTamkhulu agqibe ukwakha, uMakhulu uMary wabeleka unyana wakhe wesibini uThomas Whitton (3) Williams, owaba ngoyena khokho wam.
Ngo-1843 uTamkhulu uThomas wancedisa ukuguqulela ngesiFiji incwadi yeVangeli kaYohane, ibe loo msebenzi wawufumanisa unzima gqitha. * Kodwa ke, wayeyingcali kulwazi lwamasiko nembali yoluntu, ibe wayeneliso lokhozi. Uphando awalwenzayo walubhala kwincwadi yakhe ethi Fiji and the Fijians (ka-1858), ebalisa ngempilo yamaFiji ngeminyaka yee-1800.
Emva kokutsala nzima iminyaka eyi-13 eFiji, impilo kaTamkhulu uThomas yaba maxongo, kwaye kwafuneka ukuba yena nentsapho yakhe bafudukele eOstreliya. Emva kokuba ngumfundisi ophum’ izandla ixesha elide, wasweleka kwidolophu iBallarat eVictoria, ngo-1891.
Ngo-1883 uTamkhulu uThomas Whitton Williams nenkosikazi yakhe uPhoebe (4) bafudukela ePerth ekwiNtshona yeOstreliya nentsapho yakhe. Unyana wabo wesibini uArthur Bakewell (5) Williams ongukhokho wam olandelayo wayeneminyaka esithoba ngoko.
Xa uTamkhulu uArthur wayeneminyaka eyi-22 waya kuphanda ubutyebi eKalgoorlie idolophu enemigodi ekwiikhilomitha ezimalunga ne-600 ukusuka ePerth. Waqalisa apho ke ukufunda iincwadi ezipapashwe ngamaNgqina kaYehova awayebizwa ngokuba yi-International Bible Students Association ngelo xesha. Wafaka nesicelo sokufumana iZion’s Watch Tower nyanga nganye. Kangangendlela awayezithanda ngayo izinto awayezifunda, waqalisa ukuxelela abanye ngazo, waza waqalisa nokuba neentlanganiso zokufundisa iBhayibhile. Waqala njalo ke umsebenzi wamaNgqina kaYehova kwiNtshona Ostreliya.
UTamkhulu uArthur waxelela nentsapho yakhe ngezinto awayezifunda. Utata wakhe, uTamkhulu uThomas Whitton wamxhasa uArthur kumsebenzi awayewenza naBafundi BeBhayibhile, kodwa itshoba lalal’ umbethe kungekudala emva koko kule nkonde. Umama wakhe uPhoebe, kunye noodadewabo uViolet noMary baba ngaBafundi BeBhayibhile. UViolet waba ngumvangeli weBhayibhile wexesha elizeleyo, okwabizwa ngokuba nguvulindlela. UArthur wathi uViolet “ngoyena mshumayeli weBhayibhile uphum’ izandla nozinikeleyo uMzantsi Ostreliya wakha wambona.” Kakade wayengena kungatsho ngodade wabo, kodwa ke yinyani ukuba umzekelo wokuzimisela kukaViolet wasinceda isizukulwana esilandelayo sakwaWilliams.
Ekuhambeni kwexesha, uTamkhulu uArthur watshata waza wafudukela eDonnybrook, idolophu elima iziqhamo kwiNtshona yeOstreliya. Apho wayeqhulwa ngokuba “nguTat’ u-1914!” ngenxa yokuzimisela kwakhe kumsebenzi wokuxelela abantu ngeziprofeto ezazikhomba kuloo nyaka. * Amazinyo ajika aziinyanda xa kwaqhambuka iMfazwe Yehlabathi I. UTamkhulu wayesoloko encokola ngeBhayibhile nabantu abeze kuthenga evenkileni yakhe, eyayixhonywe iincwadi zeBhayibhile ezifestileni. Kwakuxhonywe nombhalo othembisa nge-£100 (R951.41) kuye nabani na onokukwazi ukubonisa eBhayibhileni ukuba uThixo uneziqu ezithathu, mfundiso leyo uTamkhulu wayeyazi ukuba ayikho eZibhalweni. Akukho namnye owayifumanayo loo mali.
Iintlanganiso zebandla zokufunda iBhayibhile eDonnybrook zazingenela kwaWilliams. Emva kwexesha, uTamkhulu uArthur wakha iHolo YoBukumkani, okanye indawo yokuhlanganisana edolophini, enye yeendawo zokuqala zamaNgqina kaYehova kwiNtshona Ostreliya. Nangona wayeneminyaka engaphaya kweyi-70, wayedla ngokuzithi suti yakhe, afake iqhina, afak’ isali ehashini lakhe uDoll, aze enjenjeya ukuya kufundisa abantu kuwo wonke ummandla waseDonnybrook.
Yayibachukumisa abantwana bakaTamkhulu into yokuba athi engumntu ozole nonesidima kangaka, akhuthale ngolo hlobo. Intombi yakhe uFlorence (6) yaya kuba ngumthunywa wevangeli eIndiya. Oonyana bakhe, uArthur Lindsay (7) noThomas baba ngabadala bebandla kangangexesha elide njengotata wabo.
UNCUTHU LUKAMAM’ UWILLIAMS
Ukhokho wam uArthur Lindsay Williams wayesaziwa ibe ethandwa ngabantu ngenxa yendlela awayenobubele ngayo. Wayesoloko ebakhathalela abantu ibe ebaphatha ngesidima. Wayeyiyo nengcaphephe xa kufikelelwa kwizembe, ibe wafumana iimbasa eziyi-18 kukhuphiswano lokucanda kwiminyaka nje eyi-12.
Sekunjalo, akazange onwabe kwaphela uTamkhulu uArthur xa unyana wakhe oneminyaka emibini uRonald (8) (oyena tamkhulu wam), wacanda umthana weapile owawusecaleni kwendlu. Umama wakhe wawubopha lo mthi wada ekugqibeleni wamila, wavelisa ama-apile abomvu aluncuthu mazangwa. La ma-apile athiywa ngoMam’ uWilliams, yaye athandwa ehlabathini lonke.
Emva kwexesha, uTamkhulu uRonald, okanye uGramp (indlela endimbiza ngayo) waye wenza imisebenzi ebaluleke ngakumbi. Kangangeminyaka, yena noMakhulu baqhubeka bengamavolontiya ekwakheni izakhiwo zamaNgqina kaYehova eOstreliya naseSolomon Islands. Nangona ngoku uGramp eleqa iminyaka eyi-80, usengumdala webandla, ibe usancedisa ekwakhiweni nasekulungisweni kweeHolo zoBukumkani eNtshona Ostreliya.
NDIYALIXABISA ILIFA LAM
Abazali bam uGeoffrey (9) noJanice (10) Williams nabo baxhamla kwilifa lentsapho yethu, ibe babila besoma befundisa mna nodade wethu uKatharine indlela yokuphila efanele amaKristu. Xa ndandina-13, ndenza isigqibo sokuphila ngendlela evuyisa uYehova. Kwathi xa ndandikwindibano yamaKristu ndeva uJohn E. Barr, owayelilungu leQumrhu elilawulayo lamaNgqina kaYehova esithi kulutsha olwalulapho: “Musani ukudlalisa ngeyona nto ibalulekileyo ninayo, ithuba lokwazi nokuthanda uYehova.” Ndabunikela ngobo busuku ubomi bam kuYehova. Emva kweminyaka emibini, ndaba nguvulindlela.
Namhlanje, mna (12) nomkam uChloe (11) sikuthanda gqitha ukufundisa abantu iBhayibhile ixesha elizeleyo kwidolophu esemaphandleni iTom Price, ekwiNtshona Ostreliya. Sibambe imisebenzi yesingxungxo ukuze sikwazi ukuziphilisa. Abazali bam, udade wethu uKatharine kunye nomyeni wakhe uAndrew bangoovulindlela ePort Hedland ekwiikhilomitha eziyi-420 ngasemntla. Mna noTata sikwangabadala bebandla.
Kwizizukulwana ezisixhenxe ezadlulayo, ukhokho wam uThomas Williams wazimisela ukukhonza uYehova uThixo. Nam ndiye ndaxhamla kwelo lifa lokholo nenkonzo. Ndiziva ndisikeleleke kakhulu ngokuba nobutyebi obungaka belifa lokukhonza uYehova.
^ isiqe. 5 La manani akhomba mntu ngamnye ekuthethwa ngaye kule mifanekiso ilandelayo.
^ isiqe. 6 Sasikade sibizwa ngokuba sisiQithi saseLakemba, esiyinxalenye yeziQithi ezibizwa ngokuba yiLau zaseFiji.
^ isiqe. 10 UMthunywa wevangeli uJohn Hunt waguqulela iTestamente Entsha, eyapapashwa ngo-1847. Le nguqulelo inika umdla kakhulu kuba isebenzisa igama likaThixo elibhalwe ngokuba ‘ngu-Jiova’ kuMarko 12:36, Luka 20:42, neZenzo 2:34.
^ isiqe. 16 Funda umxholo othi “Owe-1914—Unyaka Obalulekileyo Kwisiprofeto SeBhayibhile” kwisihlomelo sencwadi ethi Yintoni Ngokwenene Efundiswa YiBhayibhile? epapashwe ngamaNgqina kaYehova, iyafumaneka nakwiWebhsayithi u-www.jw.org/xh.